भिडियो Archives - Page2of 38 - inaruwaonline.com
जिर्ण र साँघुरो पुलले गर्दा गाउँमा बाढि… (भिडियो)
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको कुरुवा खोलाको बाढी बस्तीमा प्रवेश गरेको छ । कुरुवा खोलामा रहेको जिर्ण र सँघुरो पुलको कारण पानि खोला बहिर भएर बग्ने गरेको छ । निरन्तर वर्षाको कारण पानिको बहाव बढेर खोलाको पानि गाउँ बस्तिमा प्रवेश गरेको स्थानियहरुले बताएका छन । खोलामा रहेको साँघुरो पुलको स्तर उन्नति नहुदाँ बर्षैपिछे आएको बाढिले स्थानियहरुको जनजिवन कष्ठकर हुदैँ आएको छ । सानो र जिर्ण पुलक...
रामजानकी कृषि सहकारी संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न (भिडियो रिपोर्ट)
इनरुवा नगरपालिका वडा नं. ४ मा रहेको श्री रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लि.को प्रारम्भिक साधारण सभा समापन गरिएको छ । इनरुवा नगर क्षेत्रमा रहेको विभिन्न स्तर र वर्गका मानिषहरुको आम्दानिलाई उचित व्यवस्थापन र भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि यहाँका युवाहरुको समुहले कृषि सहकारीको अवधारणलाई श्री रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड संचालनमा ल्याएको छ । इनरुवा नगर क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढि मानिसहर...
इनरुवा बजारकालागी अतुल्नीय क्षती (भिडियो)
इनरुवा बजारमा रहेको हनुमान वस्त्रालयमा भएको आगलागीमा ५ करोड बढी क्षतिको अनुमान गरिएको छ । भिडियोकालागि तल क्लिक गर्नुहोसः
आइतबार, जेठ ३२, २०७७
पूर्वाधारको सडक तर कमसल सामाग्री ! मुछिए गाउँकै प्रतिष्ठितहरु । किन लाग्यो आरोप ? (भिडियो)
पूर्वाधारको सडक तर कमसल सामाग्री ! मुछिए गाउँकै प्रतिष्ठितहरु । किन लाग्यो आरोप स्थलगत रिपोर्ट भिडियोकालागि तल क्लिक गर्नुहोसः
कतारबाट नेपाल फर्कन चाहनेले यसरी भर्नुहोस् फाराम (भिडियो)
दोहा / कोराना भाइरस कोभिड-१९ का कारण कतार आइडी वा भिसा समाप्त भएका तथा आइडी रद्द भएर रोजगारी गुमाए बार्षिक बेतनी बिदा भएको र करार अबधि सकिएर नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई फाराम भर्न कतार स्थित नेपाली दूताबासले आग्रह गरेको छ । दूताबासले दिएको जानकारी अनुसार सुत्केरी र गर्भवती महिला तथा आफन्तको मृत्यु भइ काजकिरियाका लागि फर्कनु पर्ने, भिजिट वा बिजनेश भिसामा भएकाहरुले नेपाल फर्किन फर्ने भए फाराम नभर...
इनरुवा। विश्व नै कोरोनाको माहामारीले आक्रांत भएको बेला नेपालमा पनि दिनहु संक्रमितको संख्यामा वृद्दि हुदै गएको छ। नेपालमा लकडाउन अवधि जारी भएको आज दुई महिना पार गरि सकेको छ। यस बिचमा नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार देशै भरि नै सम्पुर्ण कामकाज, उधोग कलकारखाना, निर्माणकार्य आदि बन्द नै रहेको थियो। यसै बिच केही दिन अगाडी देखि सरकारले लकडाउनलाई चरणबद्ध रुपमा केही खुकुलो बनाउदै आएको छ। चालु आर्थीक वर्ष...
कोरोना भाइरसको माहामारीले गर्दा देशको अवस्था झन झन जटिल बन्दै गएको छ। देश संगै यस माहामरीले गर्दा इनरुवा नगरपनि चोखिएको छैन्। कोरोना भाइरसको माहामारीको समयमा नगरभित्रका समग्र गतिविधिका बारेमा आज हामी यस इनरुवा अनलाईनको विशेष संवाद कार्यक्रममा इनरुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन मेहता संग कुराकानी गरेका छौ। माहामारीको समयमा नगरभित्रका समग्र गतिविधिका बारेमा गरिएको कुराकानीको भिडियो अंशः भिडियोकालाग...